Banijya News | » नेपालीमा तीन वर्षमा ३० प्रकारका खोपको परीक्षण, के नेपालमै यस्तो परीक्षण गर्नुपर्ने ? नेपालीमा तीन वर्षमा ३० प्रकारका खोपको परीक्षण, के नेपालमै यस्तो परीक्षण गर्नुपर्ने ? – Banijya News
नेपालीमा तीन वर्षमा ३० प्रकारका खोपको परीक्षण, के नेपालमै यस्तो परीक्षण गर्नुपर्ने ?
विकशित देशले औषधी, खोप र उपकरणको उत्पादन गर्ने अनी गरिब देशमा त्यस्को परीक्षण गर्ने काम हुँदै आएका छन् । विकाशित मुलुकमा उत्पादन भएका यस्ता औषधी, खोप र उपकरण नेपालमा पनि अन्धाधुन्द रुपमा परीक्षण हुने गरेको छ । विदेशी प्रस्ताव स्वीकारेर नेपालीको शरीरलाई परीक्षणस्थल बनाउन काम धमाधम भैरहेको छ । यसरी परीक्षण गर्दा परीक्षणकै क्रममा कतिपय विरामीले यस्तो खोप र उपकरणका कारण ज्यानै गुमाउने देखि गम्भिर खालको दिर्धकालीन असर बोकेर बाँच्नु परेको छ ।
नागरिकलाई आफ्नो शरीरमाथि के–कस्तो परीक्षण भइरहेको छ भनेर जानकारी दिनु पर्ने प्रावधान नेपाललको कानूनले स्पष्ट पारेको भएपनि त्यस्को कही कतै पालना भने भएको छैन् ।
तीन वर्षयता नेपालमा ३० प्रकारका खेपको परीक्षण भएको छ । तर जनतालाई त्यस्को कुनैपनि जानकारी छैन् । पाटन अस्पताल लगायतका स्वास्थ्य संस्थामा ९ महिनादेखि १६ वर्षसम्मका २० हजार बालबालिकामा टीसीभी भ्याक्सिनको परीक्षण गर्दे आएको छ । टाइफाइड विरुद्धको खोपको यो परीक्षण आगामी भदौ ४ मा सकिनेछ । यस्ता खोप र औषधि परीक्षणका लागि अनुमति दिने आधिकारिक निकाय नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले गर्दे आएको छ । परिषदको इथिकल बोर्डले हरेक पाटो हेरेर स्वीकृति दिएपछि मात्र मानवमाथि ट्रायल वा परीक्षण गर्न पाइन्छ । तर नेपालमा बोर्डका पदाधिकारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा परेर थुप्रै यस्ता परीक्षण गरिएको छ । परिषद्को तथ्यांक अनुसार २०७३ पुसदेखि हालसम्म नेपालमा खोप, औषधि र औषधिजन्य साधनको ३० वटा परीक्षण गरिएको छ ।
कान्ति बाल अस्पतालमा रोटा भाइरस विरुद्धको खोप परीक्षण गर्दा बालबालिकामा नकारात्मक असर पारेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमा सरकारलाई तत्काल खोप बन्द गर्न आदेशसमेत दिएको थियो । यस्तै करिब १५ वर्षअघि ग्लासगो स्मिथकाइन बिकेम नामक औषधी कम्पनीले अमेरिकि सेनासँगको सहकार्यमा नेपाली सैनिकमाथि हेपाटाइटिस इ को परीक्षण गरेको थियो । सुरुमा ललितपुरमा गर्न लागिएको उक्त परिक्षणको जनस्तरबाट विरोध भएपछि तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रज्ज्वलशमशेर राणाले सेनामा परीक्षण गर्न अनुमति दिएका थिए । जनस्तर बाट भएको विरोध थाम्न नसकेर सैनिकमा गरिएको यो परीक्षणले नै नेपालमा कसरी यस्ता खोप र उपकरणको परिक्षण हुन्छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । औषधि र खोपको परीक्षण कतिसम्म गर्न दिने भन्ने सीमा सरकारले नतोक्दा जनता भने आक्रान्त हँुदै गएका छन् ।